करिश्मा कपुरसँग विवाह नभएपछि के गर्दै छन् अक्षय खन्ना ? - Nepalese Times
३३ किलो सुन का’ण्डमा फ’रार सूचीमा रहेका यी व्यक्ति अन्ततः गौशलाबाट समातिए 15 घण्टा अघि
जब भीम रावलले एमसीसीबारे संसद बैठकमै यसो भने‍‍‍… 19 घण्टा अघि
करिश्मा कपुरसँग विवाह नभएपछि के गर्दै छन् अक्षय खन्ना ?
नेप्लिज संवाददाता १५ चैत्र २०७७, आईतवार १६:२४ (4 महिना अघि) १८७ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता विनोद खन्नाका छोरा अक्षय खन्नाले बलिउडमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका छन् । अक्षयको जन्म २८ मार्च १९७५ मा भएको थियो । अक्षयले बलिउडमा आफ्नो करियर १९९७ मा चलचित्रुहिमालय पुत्रु बाट सुरु गरेका थिए । अक्षय खन्नाको दोस्रो चलचित्र ‘बोर्डर’ हो ।
अक्षय खन्नाले फिल्म ‘ताल’ बाट पहिचान बनाए । चलचित्र १९९९ मा रिलिज भएको थियो र सुपर हिट भयो । फिल्ममा अक्षयसँग ऐश्वर्या राय थिइन् । फिल्म दिल चाहता हे बाट अक्षयले फिल्म फेयर वेस्ट सपोर्टिङग एक्टरको अवार्ड पाए ।
अक्षय खन्नालाई एकपट विवाह बारेमा सोधिएको प्रश्नमा भनेका थिए , मलाई बच्चा मन पर्दैन त्यसैले मैले आजसम्म विवाह गरिन । साथै उनी भन्छन् , म कहिले पनि विवाह गर्न चहादिन । मलाई एकलै बस्न ठिक लाग्छ । म केही समयसम्म सम्बन्धमा रहन सक्छु तर लामो समयसम्म त्यो सम्बन्धलाई निभाउन सक्दिन ।
अक्षय खन्नाको नाम दुई(तीन हिरोइनसँग पनि जोडिएको थियो । यस मध्ये एक हुन् तारा शर्मा । अक्षय सधैँ लजालु स्वभावका रहेका छन् त्यसैले उनी आफ्नो पर्सनल लाइफको बारेमा कुरा गर्दैनन् । ताराको विषयमा पनि उनले बाहिर कहिल्यै कुरा गरेनन् । अक्षय खन्ना केही समय रिया सेनसँग पनि डेटमा रहे ।
अक्षय खन्नाको अन्तिम गर्लफ्रेन्ड सेरा हुन । सेरा एक ब्रिटिस मोडल हुन् । अक्षय र सेरा भेटघाट इङल्याण्डको ट्रिपमा भएको थियो । सेराले अक्षयसँग भारतमै बस्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर पछि अक्षयले एक जर्मन केटीको लागि उनलाई धोखा दिएको हल्ला बाहिरिएको थियो । हाम्राकुरा डटकमबाट ।